Wada Tashigii Guurtida Wax-garadka Deegaanka Iyo Hogaaminta XDSHSI Oo Wali Kasocda Madasha Qaryaan Dhoodaan - Cakaara News
Wada Tashigii Guurtida Wax-garadka Deegaanka Iyo Hogaaminta XDSHSI Oo Wali Kasocda Madasha Qaryaan Dhoodaan
Jigjiga(CN) Jimce.Jan.23.2015, waxaa galabta halkiisii kasii socday shirkii wadatashiga ahaa ee u dhaxeeyay hogaaminta xibiga iyo golaha guurtida waxgaradka iyo salaadiinta, iyadoo maanta galinkii hore degaanka laga xusayay munaasibada loogu dabaal dagayo 15-ka bisha Tir oo ah maalintii dhidibada loo aasay xkuumadii ugu horaysay ee DDSI.
Hadaba waxaa maanta galinkii danbe halkiisii kasii socday shirwaynihii balaadhnaa ee hogaaminta XDSHSI iyo waxgaradka degaanka oo muddo saddex cisho ah kasocda magaalada Jigjiga gaar ahaan madasha shirarka ee Qaryaan Dhoodaan.
Sida aad wararkayagii shalay kala socoteen waxaa go'aan cad la isla qaatay ladagaalanka argagixisada iyo xag-jirka kadib markii ay wax-garadka deegaanka iyo hogaamnita xisbigu aad isula lafa gureen xaaladaha iyo saamaynta argagixisada ee Geeska Afrika.
Shirkan oo Lagaga wada hadlayo arimo dhowr ah ayaa waxaa galabta guriga Qaryaan Dhoodaan aad loogu lafa guray wax-qabadkii xukuumada iyo qorshayaasha horumarineed ee deegaanka iyo dalkaba kuwaas oo ay kamid ahaayeen qorshaha isbadalka iyo kobaca dhaqaalaha ee shanta sano oo sanadkani yahay midkii ugu danbeeyay.
Sidauu waraiyaha CakaaraNews wakhti xaadirkan kusoo waramayo shirkan galabta ayaa soconaya ilaa fiidnimada caawa iyadoo sidoo kalena lafilayo in isla caawa ay xaflad balaadhini kadhacdo madasha SMCX haalkaas oo laga yaabo in lagusoo afjaro shirkan guurtida wax-garadka iyo hogaaminta xisbiga oo saddexdan cisho xarunta Jigjiga kasocday.
Shirkan ayaa ahmiyad gaar ah u leh wakhtiga oo ah xili lagalayo qorshihii labaad isbadalka iyo koboca dhaqaalah ee shanta sano iyo dorashadii 5aad ee dalka iyo deegaanadaba. Waxaana lafilayaa in ay kasoo baxaan go'aamo karaar galinaya nabadgaliyada iyo horumarka uu deeaanku kutalaabsaday.